Semalt को साथ Google को पृष्ठ अनुभव अपडेट को लागी एक वेबसाइट अनुकूलन
Semalt का साथ Google को पृष्ठ अनुभव अपडेट को लागी एक वेबसाइट अनुकूलन
Google को पृष्ठ अनुभव अपडेट चाँडै रोलिंग आउट छ, तपाइँको वेबसाइट तयार छ? हाम्रो काम यहाँ छ Semalt तपाइँ खोज मा त्यो प्रतिस्पर्धी किनारा दिन को लागी हो। यदि तपाइँ तपाइँको साइट लाई अनुकूलित गर्नुभएको छैन, हामी बताउनेछौं कि यो किन महत्वपूर्ण छ। हामी केहि तरिकाहरु लाई पनि उल्लेख गर्दछौं कि हामी तपाइँको साइट लाई Google को अनुभव अपडेट को लागी अनुकूलित गर्न सक्छौं।
Google को पृष्ठ अनुभव अपडेट के हो?
यदि तपाइँ गूगल र यसको एल्गोरिथ्म परिवर्तनहरु लाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाइँ जान्नुहुनेछ कि गूगल २०२१ मा आफ्नो पेज अनुभव अपडेट रोल आउट गर्ने योजना बनाएको छ। यो अपडेट कसरी गूगल को पानाहरु लाई रैंक गर्ने भन्नेमा लक्षित छ। परम्परागत श्रेणीकरण विधिहरु को विपरीत, गुगल प्रयोगकर्ता अनुभवहरु को बारे मा अधिक चिन्तित भएको छ। पृष्ठ अनुभव अपडेट मौलिक को रूप मा प्रयोगकर्ता अनुभव लाई विचार गर्न शुरू हुनेछ।
सुसमाचार यो हो कि अपडेट अन्ततः यहाँ छ, र यदि तपाइँ तपाइँको साइट लाई अनुकूलित गर्नुभएको छैन, यो धेरै ढिलो भएको छैन। दुर्भाग्यवश, तपाइँका धेरै जसो प्रतियोगीहरु लाई आफ्नो वेबसाइट मा यो अपडेट निष्पादित गर्न को लागी सम्भव छ, र उनीहरु हाल एक रैंकिंग बूस्ट को आनन्द लिइरहेका छन्। हामी त्यो चाहदैनौं र न त तपाइँले गर्नु पर्छ, त्यसैले तपाइँ के को लागी पर्खिरहनु भएको छ? Semalt ले तपाइँको वेबसाइट र यसको सामग्री को प्रबंधन र सुधार गर्न सक्छ, त्यसैले यो धेरै राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ। आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् शीर्ष श्रेणी को सेवाहरु को आनन्द लिन को लागी।
मार्केटि with संग पर्याप्त; हामी तपाइँलाई देखाउँछौं कि हामी कसरी एक राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव को लागी तपाइँको साइट लाई अनुकूलित गर्ने योजनामा ​​छौं। त्यहाँ तीन मुख्य क्षेत्रहरु मा हामी ध्यान केन्द्रित गर्दछौं जब गूगल को पेज अनुभव अपडेट को लागी तपाइँको साइट को तयारी। एकपटक हामी सबै तीन को माध्यम बाट मापन गरीसकेपछि, हामी पनी धेरै अन्य चीजहरु लाई हाम्रो गर्न को सूची बन्द गर्न को लागी हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं कि तपाइँको वेबसाइट तयार छ।
यो एक आश्चर्य को रूप मा आउनु हुँदैन। तपाइँको लोडि speed गति सामान्यतया कसरी खुसी वा निराश एक प्रयोगकर्ता एक पृष्ठ संग छ निर्धारण गर्दछ। Google को CWVs को पहिलो सबैभन्दा ठूलो सामग्रीयुक्त रंग (LCP) हो। यो कुनै पनि वेबपेज मा सामग्री को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो टुक्रा लाई जनाउँछ।
यो एक मेट्रिक हो कि निर्धारित गर्दछ कती छिटो एक पृष्ठ एक प्रयोगकर्ता को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदर्शित गर्दछ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरु छन् हामी LCP को लागी तपाइँको साइट लाई अनुकूलित गर्न सक्छौं।
पहिलो दृष्टिकोण सामान्यतया सर्वर अनुकूलन गर्न को लागी हो। हामी यो गर्छौं किनकि ढिलो सर्भर सुस्त प्रतिक्रिया समय को एक सामान्य कारण हो। तपाइँको सर्भर लाई गति दिन को लागी, हामी केहि प्रदर्शन मार्गदर्शन चलाउन को लागी हुन सक्छ, त्यसैले सर्वर एक स्थिर पृष्ठ मा बदलिन्छ जब पनी यो पृष्ठ क्लिक गर्न को लागी पनी निर्माण गर्न को लागी अनुरोध गरीन्छ।
केहि अन्य वेबपेज कम्पोनेन्टहरु लाई LCP लोड गर्न ढिलो गर्न सक्छ। यो छवि, भिडियो र पाठ सुविधाहरु संग ब्लक स्तर तत्वहरु को संख्या मा विचार गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। यदि एक वेबपृष्ठ मा यी तत्वहरु को धेरै धेरै छ, उनीहरु पृष्ठ को लोड समय को ढिलो, जो एक ढिलो LCP मा परिणाम।
यी मुद्दाहरु लाई फिक्स गर्न को लागी, हामी छविहरु र पाठ फाइलहरु लाई संकुचित गर्न सक्छौं, केहि सम्पत्तिहरु लाई क्यास गर्न सक्छौं र पृष्ठ मा केहि तत्वहरु लाई पूर्वलोड गर्न सक्छौं।
दोस्रो कारक हामी विचार पहिलो इनपुट ढिलाइ (FID) हो। एक पृष्ठ को FID समय को मात्रा यो एक प्रयोगकर्ता को लागी उनीहरु पृष्ठ मा क्लिक गरीएको तत्व संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी मात्रा हो। यो एक लिंक वा एक बटन हुन सक्छ; यो साँच्चै फरक पर्दैन। छिटो पृष्ठ प्रतिक्रिया, राम्रो। मानक FID, गुगल अनुसार, १०० मिलिसेकेन्ड भन्दा छोटो छ।
पाठकहरु लाई पहिले नै थाहा छ कि कुन वेबसाइटहरु उनीहरुलाई केहि समय को लागी पर्खिरहेछन् उनीहरु एक पृष्ठ मा एक तत्व मा क्लिक गरे पछि। उनीहरु स्वचालित रूपमा साइट संग कम प्रभावित महसुस, र तपाइँ उनीहरुलाई अधीर हुनुको लागी गल्ती गर्न सक्नुहुन्न। हामी एक पाउने उमेर मा बाँचिरहेका छौं जहाँ हामी सकेसम्म चाँडो गतिविधिहरु को माध्यम बाट सार्न को लागी सक्षम हुन को लागी एक हाइपरलिंक खोल्न को लागी १० सेकेन्ड प्रतीक्षा औसत भन्दा कम छ। तर के कारणले यस्तो हुन्छ?
यसको मुख्य कारण यो हो कि ब्राउजर अन्य कार्यहरु संग धेरै व्यस्त छ। जबकि निर्देशन प्रयोगकर्ता द्वारा दिइएको थियो, यो सम्भव छ कि ब्राउजर को विश्लेषण गरीरहेको थियो र एक भारी जाभास्क्रिप्ट फाइल को लागी।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँका आगन्तुकहरु तपाइँको वेबसाइट मा एक राम्रो समय को आनन्द लिनुहोस्, खास गरी यदि यो उनको पहिलो यात्रा हो। यदि प्राप्त बाट एक प्रयोगकर्ता नोटिस कि तपाइँको वेबसाइट ढिलो छ, उनीहरु प्राय सम्भवतः छोड्छन् र कहिल्यै फिर्ता आउँदैनन्। तर यदि तपाइँ एक अचम्मको अनुभव प्रदान गर्न र एक बलियो पहिलो छाप सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, तपाइँ त्यो आगन्तुक को मुटु प्राप्त गर्ने संभावनाहरु लाई बढाउनुहोस्। यो के हो FID यति महत्त्वपूर्ण बनाउँछ।
यदि तपाइँ एक ढिलो FID छ, फिक्सिंग यो तपाइँको वेबसाइट मा निर्भर गर्दछ। हामी धेरै उपकरणहरु को उपयोग गर्न सक्छौं जस्तै PageSpeed ​​अंतर्दृष्टि हेर्न को लागी के कमी छ त्यसैले हामी जान्दछौं कि के सुधार गर्न को लागी। यो गम्भीर वेब-देव काम हो, त्यसैले तपाइँ यसलाई छिटो र एक पेशेवर द्वारा ठीक गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाइँको लेआउट शिफ्ट सुधार गर्नुहोस्
तपाइँको संचयी लेआउट शिफ्ट (CLS) तपाइँको वेब पानाहरु मा सामग्री कती वरिपरि घुम्छ जबकि पृष्ठ लोड को एक उपाय हो। यो एक समस्या हो तपाइँ तपाइँको साइट मा देखीएको हुनुपर्छ।
जब तपाइँ एक पृष्ठ को लागी बिल्कुल लोड गर्न को लागी पर्खिरहनु भएको छ, तपाइँ एक बटन देख्नुहुन्छ, तर जब तपाइँ क्लिक गर्न जानुहुन्छ, तपाइँले ध्यान दिनुहुन्छ कि अर्को तत्वले यसको स्थान लिएको छ र तपाइँको वांछित तत्व अर्को स्थितिमा सारिएको छ।
त्यसोभए अब तपाइँ के चाहानुहुन्छ भन्दा अरु केहि मा क्लिक गर्नुभयो। यो विज्ञापन संग सामान्य छ, वा कहिले काहिँ, तपाइँ एक आदेश पेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक खराब प्रयोगकर्ता अनुभव को लागी योगदान गर्दछ, र यो किन CLS मामिला छ। तपाइँको पृष्ठ मा तत्वहरु को यी बेवास्ता आन्दोलनहरु लाई रोक्न को लागी, तपाइँ CLS को आवश्यकता छ। यो कुनै संदेह छैन पृष्ठ अनुभव को मुख्य तत्व हो।
यो हुन बाट रोक्न को लागी, तपाइँ गुगल को परीक्षण पास गर्न को लागी तपाइँको CLS मूल्या in्कन मा अधिकतम 0.1 मा स्कोर गर्न को लागी आवश्यक छ। यदि तपाइँ कुनै पनी उच्च स्कोर गर्नुहुन्छ, तपाइँको वेबसाइट काफी परिवर्तनशील बन्नेछ, जुन तपाइँको प्रयोगकर्ता अनुभव को लागी खराब हुनेछ।
यदि तपाइँ एक WordPress साइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ केहि सामान्य CLS उच्च स्कोर कारणहरु छन्:
आयाम रहित छवि र भिडियो
गतिशील सामग्री र एनिमेशन
आयाम रहित विज्ञापन र अन्य वस्तुहरु पृष्ठ मा एम्बेडेड
अनस्टाइल गरिएको पाठको चमक
तपाइँको CLS फिक्सिंग ज्यादातर तपाइँको वेबसाइट को मोबाइल संस्करण मा लागू हुन्छ। यी पारीहरु मोबाइल उपकरणहरु मा अधिक कष्टप्रद छन्। यो किनभने धेरैजसो मोबाइल उपकरणहरु साना दृष्टिकोण र कमजोर प्रोसेसर छ।
हामी कसरी यो मुद्दा फिक्स गर्छौं यसको कारण मा निर्भर गर्दछ।
एक स्थिति मा जहाँ ब्राउजर लाई थाहा छैन कसरी आयामहरु बिना छविहरु र भिडियोहरु लाई अन्तरिक्ष गर्न को लागी, हामी आयामहरु लाई जोड्दछौं। यो समस्या को समाधान गर्न को लागी, हामी छविहरु र भिडियोहरु मा आयाम जोड्छौं ताकि ब्राउजर लाई थाहा छ कसरी प्रत्येक छवि वा भिडियो पृष्ठ मा फिट हुन्छ।
जब हामी unstyled पाठ को चमक संग व्यवहार गर्दैछौं, हामी तपाइँको फन्टहरु लाई पूर्वलोड गर्नु पर्छ। यसो गर्नाले ब्राउजर लाई तपाइँको फन्ट लाई एक प्राथमिकता तत्व को रूप मा लोड गर्न को लागी बताउँछ।
पृष्ठ अनुभव अपडेट रहन को लागी यहाँ छ। तपाइँको कोर वेब VItals प्रबन्ध र तपाइँको पृष्ठ अनुभव एक मुट्ठी भर हुन सक्छ, तर दिन को अन्त मा, यो यसको लायक छ। गुगल र प्रयोगकर्ताहरु एक राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव मा धेरै जोड दिए पछि, तपाइँको वेबसाइट राम्रो प्रदर्शन गर्दछ सुनिश्चित गर्न को लागी लगानी एक बुद्धिमानी कदम हो।
यदि तपाइँ यी तत्वहरु लाई अनुकूलित गर्नुभएको छैन, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस, र हामी तपाइँलाई पेशेवर तरीकाले मद्दत गर्न सक्छौं। र जब तपाइँ यी CWVs र पृष्ठ अनुभव तत्वहरु संग लाइन मा नहुने को लागी दण्डित गरिने छैन, यो SERPs मा तपाइँको रैंक बढाउन एक लामो बाटो जान्छ।